ပါဠိ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် စသည့် ဘာသာပေါင်းစုံ သုံးနိုင်တဲ့ အဘိဓာန် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ရသစုံလင် > ဘာသာရေးကဏ္ဍ > စာအုပ်များ > ပါဠိ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် စသည့် ဘာသာပေါင်းစုံ သုံးနိုင်တဲ့ အဘိဓာန်
View Full Version : ပါဠိ မြန်မာ အင်္ဂလိပ် စသည့် ဘာသာပေါင်းစုံ သုံးနိုင်တဲ့ အဘိဓာန်
StarDict dictionary ကို အင်စတောလုပ်ထားရင် ကိုယ်သုံးလိုတဲ့ အဘိဓာန်အမျိုးမျိုးကို တပြိုင်နက်ထဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
http://dl6.glitter-graphics.net/pub/1279/1279496bi852atzn0.gif (http://stardict.sourceforge.net/download.php) စာပို့ငှက်ကို နှိပ်ပြီး သွား၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်...
ဘယ်မှ မသွားဘူးဆိုရင်တော့ ဒါတွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
အင်္ဂလိပ်- ပါဠိ အဘိဓာန်
ပါဠိ- အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်
ဦးဟုတ်စိန် ပါဠိ- မြန်မာ.အဘိဓာန်
ဒီပုံလေးအတိုင်းဆိုရင် ပါဠိ- မြန်မာ၊ ပါဠိ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ- အင်္ဂလိပ်စတာတွေကို တပြိုင်တည်းဖော်ပြတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အစီအစဉ်တွေကိုလည်း ကြိုက်သလို စီစဉ်လို့ ရတယ်လေ။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ အဘိဓာန်ကိုပဲ ဖော်ပြပါဆိုရင်လည်း လိုသလို ပြင်လို့ရပါတယ်။ သုံးရင်းနဲ့ သိသွားပါလိမ့်မယ်..
stardict-3.0.2 exe ကို အင်စတောလုပ်ပြီးတဲ့ အခါ။ သုံးလိုသောအဘိဓာန်ကိုဇစ်ဖြေပြီရင်။ foder အတိုင်း C &gt; Program&gt; stardic&gt; dic သို့ သွားေ၇ာက်ပြီး ကော်ပီကူးထည့်ရပါမည်။ ဇော်ဂျီဖွန့် 2007 ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
ဘာသာရေး လေ့လာသူများနှင့် ရဟန်းသံဃာတော်များအတွက် အသုံးဝင်မည့် အင်္ဂလိပ် ပါဠိ၊ ပါဠိ အင်္ဂလိပ်၊ ဦးဟုတ်စိန် ပါဠိ မြန်မာ အဘိဓာန်များကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ starDict နှင့် တွဲသုံးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဠိစာလုံးပါဠ်ဆင့်များ ရိုက်ဖို့တော့ အခက်အခဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပါဠိစာကို အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
ုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတော့ အဘိဓာန်ကောင်းကောင်းလည်း လိုတာပေါ့။ ဖရီးဝဲလ်အနေနဲ့ အော့လိုင်းသုံးလို့ရတယ်။ အင်္ဂလိပ် မှ အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်တွေလေ၊ တခြားအဘိဓာန်အမျိုးမျိုးကိုလည်း တပြိုင်တည်းသုံးလို့ရတယ်။ လိုအပ်ပါက တခြားအဘိဓာန်အမျိုးမျိုးကို lingoes (http://www.lingoes.net/en/translator/download.htm)သွား၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ အဘိဓာန်နှစ်မျိုးကို အဆင့်သင့်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တခြားအသုံးဝင်တာတွေလည်း အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ ကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အင်စတောလုပ်တာလည်း မခက်ပါဘူး။ lingoes 2.6.2 ကို အရင်အင်စတောပါ။ ပီမှ ကျန်တဲ့နှစ်ဖိုင်ကို ကလစ်နှစ်ချက်စီ နှိပ်ပီ အင်စတော လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အသံထွက်လည်း ပါဝင်သလို စာပိုဒ်ကြီးတွေကို လည်း ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းနဲ့ တွဲသုံးမယ်ဆိုရင် ဘာသာပြန်စနစ်တွေလည်း ပါတယ်။ ပွိုင်တာနဲ့ ထောက်ရုံနဲ့ အသံထွက်တာအစရှိတာတွေ အရမ်းအသုံးဝင်တာတွေတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဂိမ်းအသေးလေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်.. လိုအပ်သလိုလဲ ပြုပြင်လို့ရတယ်။ ကဲသုံးကြည့်ပေတော့....
lingoes_2.6.2.exe, 4.8 MB ကိုဒီမှာ ဒေါင်းလည်း လိုက်ပါ. (http://www.mmitdev.com/group/englishlearningclubelc/forum/attachment/download?id=2257474%3AUploadedFi38%3A528527)
သူနဲ့ တွဲသုံးဖို့ Cambridge Advanced Learner&#039;s Dictionary.ld2, 7.8 MB (http://www.mmitdev.com/group/englishlearningclubelc/forum/attachment/download?id=2257474%3AUploadedFi38%3A528528)
Longman Dictionary of Contemporary English.ld2, 9.3 MB (http://www.mmitdev.com/group/englishlearningclubelc/forum/attachment/download?id=2257474%3AUploadedFi38%3A528529)
တခြားဘာသာစကားများစွာလည်း ရှိပါသေးတယ်. အားလုံးကို တပြိုင်နက် သုံးလို့ရပါတယ်. လိုအပ်ရင် ဒီနေရာ (http://www.lingoes.net/en/dictionary/index.html)ကို သွားလိုက်ပါ.. ကြိုက်သလောက်ဖရီးသုံးလို့ရတဲ့ အဘိဓာန်တွေ အများကြီးပါ။